प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र - www.sahayatra.com प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र - www.sahayatra.com
Home > Headlines > प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र
सम्मानिय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ज्यु ।
प्रधानमन्त्रीज्यु आज हजुर समक्ष मैले केही प्रश्न राख्ने जमर्को गरेको छु । हजुर देशको कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री, पुर्णरुपमा देश र जनता प्रतिको उत्तरदाईत्व हजुरको कर्तव्य हैन र ? पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हजुरको पार्टी माओवादी केन्द्रले ओली सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए पश्चात् नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा हजुर प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । प्रधानमन्त्रीज्यु किन भारतलाई हजुरले पठाएको पत्र सर्बजानिक गरिदैन ?
दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा हजुरमा पूर्बवती विचारहरू भन्दा केही विचारहरू परिवर्तन भएको अवश्य देख्न पाइयो । हजुरले छिमेकी दुई राष्ट्रमा सम्बन्ध सुधारको नाउमा विशेषदूत पठाउनु भयो । छिमेकी देशसंग बिग्रेको सम्बन्ध आफ्नो देशको हित हुने गरी सुधार गर्नु राम्रो हो जनताले बुजेकै कुरा हो । चीनमा गएका विशेषदूतको त्यति विरोध जनताबाट भएको पाइएन । तर भारतमा गएका तपार्इंका विशेषदूत भने विवादमा मुछिए ।
सन्दर्भ हजुरले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाइ पठाएको गोप्य पत्रको हो । के थियो गोप्य पत्रमा ? एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले आर्को देशकोप्रधानमन्त्रीलाइ पत्र पठाउदा परराष्ट्र मन्त्रालयलाइ जानाकारी गराउनु पर्ने होइन र ? मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गराउनु प्रने होइन र ? प्रधानमन्त्रीज्यु नेपाली जनताले तपाईँमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् ।
संविधानको कुन धारामा आधारित रहेर परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्लाइ जानकारी नगराइ कसरी दूतमार्फत पत्र पठाउनु भयो । देशप्रति हजुरमा अलिकति पनि नैतिक जिम्मेवारी छ की छैन । प्रधानमन्त्रीज्यु हजुरका दूत उपप्रधान तथा गृहमन्त्रि बिमलेन्द्र निधि स्वदेश फिर्ता भैसके पछि पनि व्यवस्थापिका संसद र मन्त्रिपरिषद्मा त्यो पत्र भित्रको विवरण किन जानकारी गराइएन ? की त्यो पत्रमा हजुरको भारत भ्रमण ताका राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने कुनै तथ्य त थिएन ? यो पनि जनतामा शङ्काको विषय हो ।
नेपाली जनताको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता राष्ट्रियता सँग जोडिएको हुन्छ । देशको प्रधानमन्त्रीका हरेक कार्यहरू जान्ने अधिकार पनि जनतामा छ । गलतलाई विरोध र सहीलार्इ समर्थन गर्नु नेपाली जनताको अधिकार हो । त्यो जनताको अधिकारलाई तपाईँले हनन गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीज्यु किन भारतलाई हजुरले पठाएको पत्र सर्बजानिक गरिदैन ? त्यो पत्र तत्काल सदन र जनतालाई हजुरले जानकारी गराउनै पर्छ । यो जनताको आवाज हो, माग हो ।
Item Reviewed: प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र Rating:5Reviewed By: Shesh Narayan Jha